Tag: tahan'ny fanokafana mailaka | Martech Zone
Tag: tahan'ny fanokafana mailaka
Zoma, Aprily 7, 2017 Terri Mock
Na dia vao niposaka aza ny lohataona, dia miomana ny hanomboka ny tetik'asa fanamboarana trano sy fanadiovana vanim-potoana ny mpanjifa, tsy lazaina intsony ny fividianana fitafiana lohataona vaovao sy ny fiverenany amin'ny endriny afaka volana maromaro. Ny hetahetan'ny vahoaka hisitrika hetsika isan-karazany amin'ny lohataona no tena mpamily ny doka misy lohataona, ny pejy fandraisana ary ny fanentanana ara-barotra hafa hitantsika hatramin'ny volana febroary. Mety mbola hisy ny lanezy
Fotoana 5 voaporofo handefasana ireo mailaka mandeha ho azy
Talata, Novambra 24, 2015 Alatsinainy, Novambra 23, 2015 Douglas Karr
Mpankafy mailaka mandeha ho azy izahay. Matetika ny orinasa dia tsy manana loharanon-karena hikitika matetika ny prospect na ny mpanjifa matetika, noho izany ny mailaka mandeha ho azy dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahaizanao mampita sy mikolokolo ny mitarika anao sy ny mpanjifanao. Emma dia nahavita asa nahafinaritra tamin'ny fanangonana ity sary ity tamin'ny mailaka mandeha ho azy 5 mahomby indrindra handefasana. Raha ao amin'ny lalao marketing ianao dia efa fantatrao fa ny automatique dia
Torohevitra fanatsarana mailaka 5 hampitomboana hanokatra sy tsindrio
Talata, Febroary 3, 2015 Alarobia, Febroary 4, 2015 Douglas Karr
Tsy ho lasa tsotra kokoa noho ity infographic avy amin'ny ContentLEAD ity. Ny prospect dia tototry ny mailaka noho ny vidiny ambany isam-bolana sy tahan'ny fiovam-po. Saingy miteraka olana goavana izany… very ny mailakao ao anaty boaty afovoany amin'ireo hafatra marketing hafa an-jatony na an'arivony. Inona no azonao atao hanavahana ny fifandraisana amin'ny mailakao amin'ny vahoaka? Ireto misy singa 5 ao anatin'ny anatomy ny hafatra mailaka miaraka amin'ny fiantraikany
Ny olana ara-barotra amin'ny mailaka dia tsy misy dikany raha tsy voatsara amin'ny finday ianao
Alahady, Aogositra 31, 2014 Alakamisy 3 martsa 2016 Douglas Karr
Raha nikasa ny hanatsara ny fifandraisanay izahay, ny zavatra voalohany nataonay dia ny fampiharana ny maodelin'ny mailaka mamaly amin'ny alàlan'ny sehatray, CircuPress, hizarana ny atiny (Hisoratra anarana isan'andro na isan-kerinandro). Tsy nahagaga ny fanovana ny antontan'isa. Mandefa mailaka isan-kerinandro amin'ireo mailaka maherin'ny 70,000 izahay amin'ny alatsinainy ary asehonay ny fanadihadianay fa izany no fiakaran'ny fifamoivoizana mihoatra ny medium na fampiroboroboana rehetra. Tsy nitranga izany raha tsy